» दु:खद खबर!बैतडीमा बस दुर्घटनामा ९ जनाको ज्यान गयो, घाटनामा घाइतेहरुको यस्तो बयान !”आकाशमा गाडी तीन पल्ट घुम्यो”,अब बाचिदैन जस्तै भयो! दु:खद खबर!बैतडीमा बस दुर्घटनामा ९ जनाको ज्यान गयो, घाटनामा घाइतेहरुको यस्तो बयान !”आकाशमा गाडी तीन पल्ट घुम्यो”,अब बाचिदैन जस्तै भयो! – हाम्रो खबर
दु:खद खबर!बैतडीमा बस दुर्घटनामा ९ जनाको ज्यान गयो, घाटनामा घाइतेहरुको यस्तो बयान !”आकाशमा गाडी तीन पल्ट घुम्यो”,अब बाचिदैन जस्तै भयो!
कैलाली,कार्तिक २८ । दार्चुलाबाट तिहार मनाउन भन्दै कैलाली आउँदै गरेका कैलाली गोदावरीका यज्ञराज कठायतका लागि बिहीबारको रात सबैभन्दा त्रासदीपूर्ण र भयानक बन्यो । दार्चुलाको गन्नाबाट महेन्द्रनगरका लागि छुटेको पवनदूत यातायातको ना ५ ख ५१४१ नम्बरको बसले एक्कासी सडक छाड्दा अब बाँचिदैन भन्ने लाग्यो ।
बस दुर्घटना भएको खबर प्रहरीले राति १०ः२४ मा पाएको थियो । त्यसलगत्तै उद्धारमा खटिएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुख बरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक मुकेश कुमार सिंहले जानकारी दिए ।अनलाइन खबर बाट